बच्चाहरु बिक्री को लागी फ्रेंचाइजी | फ्रेंचाइजी अवसरहरू Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»मिश्र»बच्चाहरु फ्रन्चाइजीहरु
चित्रित बच्चाहरू फ्रैंचाइजीहरू
भर्खरका बच्चाहरू फ्रैंचाइजीहरू
बेलायतको अग्रणी बच्चाको कम्प्युटिfफ्रान्चाइजीमा सम्मिलित हुनुहोस् भविष्यको लागि बच्चाहरूलाई मजा र रोमाञ्चकारी टेक क्लबहरूको साथ तयार गर्नुहोस् हामी वितरित गर्दछौं ...
भर्खरको र सबैभन्दा रमाईलो ब्राउज गर्नुहोस् बच्चाहरू फ्रैंचाइजी अवसरहरू आज Franchiseek International प्रयोग गर्दै।
के तपाईं बच्चाहरूसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ यदि यो तपाइँको जुनसुकै शुभ समाचार हो भने, बच्चाहरूसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूको लागि डिमांड बिभिन्न क्षेत्रहरूमा बढ्दो छ, किनकि आमा बुबा आफ्ना बच्चाहरूको लागि उत्तमको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तर बच्चासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका फ्रान्चाइजी अवसरहरू उपलब्ध छन्?
बच्चाहरू फ्रन्चाइजी अवसरहरू
त्यहाँ बिक्री को लागी फ्रेंचाइजी अवसर को एक विस्तृत श्रृंखला छन् जो बच्चाहरु संग काम गरीरहेको छ। यसमा समावेश छन्:
ट्यूशन फ्रन्चाइजीहरू - उच्च गुणस्तर शिक्षा र योग्यताको लागि मांग हरेक राम्रो अभिभावकको दिमागमा छ। यही कारणले धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूको लागि गृह शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन्। ट्यूशन फ्रेंचाइजीहरू विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मागमा धेरै छन्।
चाइल्डकेयर फ्रेंचाइजीहरू - धेरै अभिभावकहरूले राम्रो सम्भव आम्दानी कमाउन काममा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछन्, यसैले धेरै अभिभावकहरूले बाल हेरचाह र बाल सेवा सेवामा पनि परिणत गर्छन्। त्यहाँ विश्व भर मा बिक्री को लागी विभिन्न बाल देखभाल फ्रैंचाइजी अवसर को एक विस्तृत श्रृंखला छ। लगभग २ 28% बच्चाहरू आफ्नी आमासँग मात्रै बस्दै छन्, माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
बाल क्लब क्लब फ्रन्चाइजी - स्कूल र छुट्टी पछि / आधा अवधि गतिविधिहरू र क्लब फ्रेंचाइजी मा चासो बढ्दै बढेको मांग मा धेरै छ - दुबै आमा बुबा र बच्चाहरु द्वारा। बच्चाहरूलाई घरबाट बाहिर निकाल्न र भिडियो गेमहरू र स्मार्ट फोनमा खेल्नु भन्दा धेरै फुटबल र धेरै फ्रान्चाइजीहरूद्वारा होस्ट गरिएको फुटबल र बाहिरी गतिविधिहरू खेल्नु यो आमा बुबाको चासो हो।
बच्चाहरू सम्बन्धित फ्रान्चाइजीहरू पनि खुद्रा फ्रन्चाइजी क्षेत्रमा विस्तार गर्न सक्दछन्, धेरै खुद्रा फ्रन्चाइजीहरू बच्चाहरूको लुगा, खेलौना र खेलहरूमा विशेषज्ञताका साथ।
त्यहाँ धेरै फरक बच्चाहरू फ्रेंचाइजी अवसरहरू उपलब्ध छन्, तपाईं केहि पनी निश्चित हुनुहुन्छ।
बच्चा फ्रैंचाइजी किन्नु
बच्चाहरूसँग सम्बन्धित फ्रान्चाइजीको फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि तपाईं आफ्नो लागि व्यवसायमा हुनुहुन्छ, तर आफैले आफैलाई होइन।
जब तपाईं बच्चा फ्रन्चाइजीमा लगानी गर्नुहुन्छ, यो आधा अवधि गतिविधि शिविर वा मन्ना-सेह चाइल्डकेयर जस्ता चाइल्डकेयर फ्रन्चाइजी हो, फ्रान्चाइजरले प्रायः तपाईंलाई मैदानमा दौडन मद्दत पुर्‍याउने सबै कुरा प्रदान गर्दछ। यो प्राय: फ्रान्चाइजी लगानीमा समावेश हुन्छ र मार्केटिंग सामग्री, कर्मचारी वर्दी, तपाईंको आफ्नै ब्रान्डेड वेबसाइट र सामान्यतया सहि फ्रान्चाइजी क्षेत्र छनौट गर्न सहयोग समावेश गर्दछ। फ्रान्सचाइजीमा फ्रान्चाइजीका लागि प्रदान गरिएको सेवा र उपकरणहरू भिन्न हुन्छन् त्यसैले यो खरीद गर्नुहोस् कि तपाईंले खरीद गर्नु अघि फ्रान्चाइजी कागजातमा यो रूपरेखा बनाइएको छ।
तल धेरै फ्रेन्चसाइक बच्चाहरू फ्रैंचाइजी डाइरेक्टरीमा विभिन्न बच्चाहरू सम्बन्धित फ्रान्चाइजी अवसरहरू मार्फत ब्राउज गर्नुहोस्।